トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "uKumkanikazi", iqabane iimvakalelo?
Xa "uKumkanikazi" isikhundla umva elithetha
indlela 3500 yen a professional abaxeli-mathamsanqa ukufumana apreyizali ezamahala
amakhadi bhula enye, ngelixa emele umfazi Papa ngokomoya intombi phezulu, uKumkanikazi luthando izele, kuye ukumela umfanekiso koomama ezisa ubabalo. Bayekeni isithsaba, nomkhonto mfanekiso kwabasebenzi kabhishophu nokhozi azotywe, i ikhadi ukuba uthathele ingqalelo uKumkanikazi wayehleli kamnandi phezu kwetrone.
ehleli etroneni, ekubeni ikhangeleka uKumkanikazi of iphiko, kuthiwa Ufihle element wokomoya, ikhadi emele umfanekiso njenge amandla ubomi okanye uthixokazi unina nohlaza . Loo nto evela uKumkanikazi kwekhadi le koomama kunye nonyamezelo, umtsalane ngakumbi, ukuyilwa khaya, uthando, umele nempumelelo. Ukuba
uKumkanikazi nezinye iimvakalelo kwindawo entle ithathwa ukuba ibhekisele
uKumkanikazi yemeko entle baphuma, umele ukuba ngomoya oluzinzileyo kakhulu. UKumkanikazi ke elibheke ihlabathi indlela ingqondo ebanzi bencumile eholweni yaye wayehleli kamnandi, kuba simela imeko wonelisekile, kwimeko zombini Ndicinga ukuba abantu welinye iqela njengokuba efanayo I sizilibale ngawe limele ukuba.
badle kunye nayo nayiphi na sisebenzisane kwizinto ezincinane, kuba limela uxabiso okanye ubudlelwane kunokwenzeka, nceda ube ngaphandle encumile ndikunyamekele kweli iqela karhulumente. Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo, elinye iqela liya kuba nchavelelo nxamnye nawe. Ndikholelwa ukuba kuya kuphuma kuwe, kodwa umbuso nto Okose intshukumo kwabo siqu.
Akuyomfuneko ukuba senze ungxamile, kodwa intetho ukuncuma ukhululeke, nceda uzame sokubetha isibhakabhaka sibonakala iqembu kakuhle. Dating kwakhona ingumbono omhle ukuyibona umenywe ngamandla.
iqabane imvakalelo umva indawo uKumkanikazi ithathwa ukuba ibhekisele
Emotional Ukuba uKumkanikazi waphuma kwi-reverse sikhundla, amampunge, kukungazinzi ngokweemvakalelo, jonga parameters ezifana lobuvila. Kwimeko zombini Ndicinga ukuba abantu, kukho kungenzeka ukuba omnye umntu onganelisekanga imo quo. Khumbula wadibana isimo exhilarated ixesha umdlali wadibana sengqondo entsha, nceda ukuze sikholise kumdlali welinye icala.
Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo okwangoku ayinayo bahle nxamnye nawe. Ngaba akathathi, njengoko kubonisiwe kwi intshukumo umkhonto nxamnye elinye iqela? Nekhwele elinye iqela zama ukukhumbula, makhe sizame ukuba sisondela ukusuka ngexesha elithile. Ukususela meko iye yatshintsha, kodwa sicebisa ukuba uzama ukusondela ukuba elinye icala, ukuba imeko elolo hlobo akuthethi ukutshintsha, ngokuba uya kuthetha ukuba ubuhlobo kunye elinye iqela le nkqubela, khangela ukuba omnye umdlali elandelayo ndiyanikezela oko kunokuba nzima.